Phumla eLongueville B&B - I-Airbnb
Phumla eLongueville B&B
UFrances ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
Ikhaya lethu likummandla othe cwaka onamagqabi umgama oyi-9km kunye nokukhwela ibhasi enye okanye isikhitshane ukuya kumbindi wesixeko. Qubha echibini, hamba uhambe ehlathini okanye uphumle nje. Igumbi lethu lokulala elitofotofo licocekile, litofotofo kwaye linokukhanya okuninzi. Sijonge ukudibana nawe.
Ukususela ngoku ungena kwikhaya lethu uya kuziva wamkelekile. Siyindlu ekhululekileyo, ehamba lula eyonwabela ukundwendwela iindwendwe zalapha ekhaya naphesheya kolwandle. Le ndlu isanda kulungiswa ngokutsha. Singakubonisa ukuba ungaya phi kwaye wenze ntoni eSydney kunye nendlela yokuhamba.
4.85 · Izimvo eziyi-81
Indawo esihlala kuyo inamagqabi, ikhuselekile kwaye inobuhlobo. Uyakonwabela ukuhambahamba ujikeleze izitalato. Ezinye iimbono ezintle zedolophu kunye ne-harbor bridge zinokubonwa kwiindawo ezahlukeneyo. Izindlu ubukhulu becala zinkulu kwaye kukho iipaki ezininzi kumgama omfutshane omnye komnye. Ilali yeevenkile zalapha ikumgama oziikhilomitha ezi-2 ukusuka kwikhaya lethu.
Siza kusebenzisana neendwendwe kangangoko zinqwenela. Ndiba sekhaya rhoqo emini ngoko ke ndiyafumaneka ukuze ndincede ngeengcebiso okanye ukuba nencoko nje.
Inombolo yomthetho: PID-STRA-3084